Miverina mitodika amin'ny asantsika miaraka amin'ny 2021, miomana amin'ny asa ho avy - The uncommission
Miverina mijery ny asantsika miaraka amin'ny taona 2021, miomana amin'ny asa ho avy
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2021, nanomboka niresaka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka manerana ny firenena ny 100Kin10 momba ny hevitray momba ny tsy kaomisiona, izay hanova ny politika nentim-paharazana ho lohany. Nino izahay fa, raha tokony ho tanjona nasionaly avy any ambony midina, dia mila maka tari-dalana avy amin'ireo izay tena voahilika amin'ny fahafahana STEM, indrindra ireo tanora mainty hoditra, Latina ary Amerikanina. Tny unCommission dia hampifantoka ny traikefan'ny tanora STEM ary, mifototra amin'ny tantara nozarain'izy ireo, dia mamolavola tanjona vonona amin'ny asa izay hitarika vina vaovao ho an'ny hoavintsika.
Teo am-pamaranana ny taona 2021, dia naniry ny hisaintsaina ny fiaraha-miasan'ny UnCommission izahay hatramin'izao ary hizara izay ho avy amin'ny taona vaovao.
Mpamorona mpiara-miombon'antoka amin'ny UN COMMISSION
Fantatray fa tsy ho vitanay samirery izany asa izany ary tena ilaina ny fiarahana mamorona traikefa goavana, samihafa ary mandray anjara.
Mihoatra ny Fikambanana 130 Niakatra ho tetezana sy vatofantsika, ny tsirairay amin'izy ireo dia nanaiky ny hampifandray antsika amin'ny mpitantara ary hamorona tontolo ahafahany mizara ny traikefany marina.
25 mitarika ny fiaraha-monina tsy nizara ny tantarany manokana fotsiny fa nandeha lavidavitra kokoa mba hampifandray ny namany sy ny namany ary ny fianakaviany amin'ny tsy kaomisiona.
Efa ho 600 ny mpitantara avy amin'ny Hoy i 38 nizara tamin-kerim-po ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo momba ny traikefan'izy ireo STEM. Jereo ny antony nizaran'ny mpitantara ny tantarany.
Over 100 mpihaino sy tompon-daka, anisan'izany ny rehetra avy amin'ny mpanamory sambon-danitra NASA sy mpilalao NFL ka hatramin'ny sekretera misahana ny fampianarana, nihaino mivantana ny mpitantara anay ary nanaja ny fitakian'izy ireo fiovana.
Ny sasany amin'ireo mpitantara izay nizara ny traikefany STEM
amin’ny alalan’ny tsy kaomina.
FANAZAVANA TANTARA AO AMIN'NY FAHASALAMANA
Namaky sy nihaino ny tantara rehetra nalefa tany amin'ny unCommission izahay, noho ny fahafantarana fa ny traikefa tsirairay dia manana fahamarinana manan-danja momba ny fianarana STEM.
roa ethnographers nanao famakafakana kalitao momba ny santionan'ny tantara ary namaritra ireo lamina manerana ireo tantara ary nanandratra ny tantara fijery.
Mponina anay mpanakanto voasambotra ny fototry ny zavatra renay avy amin'ny mpitantara anay hifampizarana amin'ny ankapobeny, miampita tsipika misy fahasamihafana tahaka ny vitan'ny zavakanto ihany.
Miaraka amin'ny hevi-baovao eo am-pelatanana, vondrona iray mpanolo-tsaina, izay manana ny fahaiza-manaony eo amin'ny fihaonan'ny fitoviana ara-poko sy ny fanabeazana STEM, dia nitarika antsika ho amin'ireo mpanentana ara-politika tena misy fiantraikany amin'ny fanovana.
AO AMIN'NY STEM
Ny zavatra nipoitra tamin'ireo tantara ireo dia antso ho amin'ny hetsika mazava: mila mpampianatra mamorona ny tanora STEM efitrano fianarana ho an'ny mpianatra rehetra, indrindra fa ireo mpianatra mainty hoditra, Latina ary Amerikanina ary ny hafa matetika tsy tafiditra ao amin'ny STEM. Vokatr'izany, nanolotra soso-kevitra ny 100Kin10, nandritra ny folo taona manaraka, mba hanomanana sy hitazomana ireo mpampianatra STEM tena sahy nahazo loharanom-baovao sy tohana mba hampiroboroboana ny fahatsapana ho an'ny tenany, indrindra ho an'ireo mpianatra teratany Amerikana, Latina ary Mainty.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo zavatra nozarain'ny mpitantara momba ny filana ny maha-izy azy:
Nahatsiaro ho tsy heno sy tsy hita intsony aho tamin'ny maha-mpianatra latina ahy, ary maro amin'ireo mpampianatra ahy no tsy niraharaha ny filàko tsy manam-paharoa amin'ny maha-Amerikana sy mpianatra voalohany ahy. - Gabrielle, 22 taona
Hatramin'izao dia misolovava ny STEAM aho satria raha mijery tsara ianao ary mieritreritra tsara dia afaka mampihatra izany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana. ARY mahatonga ny mpianatra hahatsiaro ho mifanentana amin'izy ireo rehefa mahita ny taratasy tiany hianarana momba ny tena, mitovy amin'ny tenako. - Mpitantara tsy fantatra anarana, 21 taona
Lohalaharana amin'ny taranja matematika aho, ary tadidiko manokana ny nanontaniana ahy raha tao amin'ny efitrano mety aho isaky ny manomboka ny semester, na ny mpianatra, na ny mpampianatra, na izy roa.
- Bradley, 26 taona
Ho setrin'ny zavatra nozarain'ireo mpitantara, nandritra ireo herinandro farany tamin'ny 2021:
Nifampizara izahay ny rafitra momba ny ao amin'ny STEM miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny tambajotra, mpandray anjara tsy komisiona ary mpitantara ny tenany amin'ny Fihaonamben'ny mpiara-miombon'antoka faha-10.
~ 160 mpandray anjara nanome ny heviny marina momba ny zavatra mampientanentana azy ireo, ny tokony hotandremantsika, ary ny fomba mety hanatanterahantsika izany fahitana izany.
Ny 100Kin10 dia hanangona sy hamerina hijery ity fanehoan-kevitra ity hatramin'ny faran'ny taona, hamerina ny rafitra sy ny vina ho avy. Ho fanampin'izay, hojerentsika ny tantara rehetra natolotra alohan'ny faran'ity taona ity ary hampiditra hevitra vaovao mipoitra ao anatin'ny fizotran'ny fanehoan-kevitray.
INONA NO HO ATAO AMIN'NY 2022
Handany ny volana vitsivitsy voalohany amin'ny taona 2022 isika hamolavola ny santionan'ny volana manaraka an'ny 100Kin10, ary koa ny famolavolana hevitra hafa vonona amin'ny hetsika ho an'ny sehatra nipoitra avy amin'ny tantaran'ny unCommission.
Eo am-panohizana ny fandikana ny tantaran'ny unCommission ho tanjona iraisana, dia hizara vaovao farany amin'ireo mpandray anjara unCommission izahay matetika araka izay azonay atao, ao anatin'izany ny mety hisian'ny fandraisana anjara amin'ny fandrosoana. Ho fanampin'izay, mikasa ny hanohy hizara tantara, zavakanto ary hevi-baovao izahay, mitazona ny mpitantara anay ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra ataonay.
Mankasitraka antsika rehetra izay nandray anjara tamin'ny tsy Kaomisiona tamin'ity taona ity. Miara-mamaha izany isika--ho an'ireo mpitantara amintsika.
Te-hisaotra anareo aho namela ahy hizara ny tantarako aminareo rehetra. Mamela ny feoko ho re sy hodinihina ny traikefako momba ny famakafakana STEM ao Etazonia, tena mankasitraka aho fa nihaino ianao. - Mpanoratra tantara tsy fantatra anarana
Misaotra betsaka anao tamin'ny fahafahana nizara ny traikefako, traikefa izay fantatro fa nananan'ny olona maro, ary avy eo nizara ny tantarako tao amin'ny STEM na dia teo aza ny tolona nataoko. - Mpanoratra tantara tsy fantatra anarana
Faly aho mahita ny fiovan'ny tontolon'ny STEM amin'ny ho avy, ary ny asa tahaka izao dia hitondra antsika any. - Mpanoratra tantara tsy fantatra anarana
Jereo ny Fanambarana bebe kokoa
Manana fanontaniana? Mandefasa mailaka unCommission@100Kin10.org